Sida loo soo dejisto loona rakibo WhatsApp bilaash aalad kasta | Wararka Gadget
Whatsapp waa macmiilka fariimaha deg dega ah ee ugu caansan. Malaayiin dad ah ayaa maalin kasta ugu adeegsada taleefannadooda gacanta, kaniiniga iyo kombuyuutarka.
In kastoo waxaa jira waxyaabo kale oo lagu beddeli karo sida Telegram oo waxaa jira tiro badan sababaha aan loo isticmaalin WhatsApp, runtu waxay tahay in xiriiradayada oo dhami ay yihiin kuwa ay aadka u isticmaalaan ilaa maalinta hijrada baaxada leh ee loo socdo madal kale ay timaado, WhatsApp waxay sii wadi doontaa inay xukumaan qaybta fariimaha iyo wakhti dheer, waxaad ku soo wacdaa VoIP.
1 Soodejiso Whatsapp
2 Guuldarrooyinka guud ee WhatsApp
Haddii aad weli shaki ka qabtid sida soo dejiso whatsapp Mid ka mid ah qalabkan, hoosta waxaan ku tusi doonaa sida loogu sameeyo mid kasta oo ka mid ah meheradaha.
Ku soo dejiso WhatsApp iPhone
Wasap si bilaash ah
Mid kasta oo ka mid ah casharradeenna waxaad ka heli doontaa macluumaad faahfaahsan oo loogu talagalay ku rakib whatsapp on aalado badan, ha noqoto kombiyuutar Windows ama OS X, iPhone, iPad ama mobiil ama kiniin ay ku rakiban yihiin Android.
Guuldarrooyinka guud ee WhatsApp
Si Whatsapp khaladaad buu ku siinayaa, halkan waxaan ku barinaa sida loo saxo khaladaadka ugu badan ee macaamiisha fariinta.
In kastoo caadi ahaan caadi maahan dhibaatooyin Markaad ku rakibayso arjiga qalabkayaga, waxaa jira xaalado ama shuruudo taxane ah oo haddii aanan u hoggaansamin, ay na siin karaan madax-xanuun kale
Waxaan rajeyneynaa in isku xirka aan kaaga tagnay dhowr khad oo kor ku xusan aad awoodid ku xalli dhibaatada WhatsApp-kaaga kuna soo biir bulshada weyn ee isticmaasha maalin kasta.